कम्प्युटर स्लो भयो ? चिन्ता नलिनुस् | मेरो कलम
– चलाइरहेको कम्प्युटरको गती एकाएक कम हुदै गयो । कम्प्युटरले खरिद गर्दाको समयमा जुन गतीमा काम गथ्र्यो अहिल्य त्यस्तो अवस्था रहेन । अझ महत्वपुर्ण काम गर्न भनेर वस्यो मिनेटको काम घण्टौसम्म पनी सम्पन्न गरिसकिएन भने त कसको कन्पारो तात्दैनर ? कम्प्युटरको गती राम्रो नहुनुमा विविध पार्टपुर्जा तथा इन्सर्टल गरिएका सफ्टवेयरमा भर पर्छ । जती स्तरिय प्रोग्राम छन् उतीनै राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ । तर अर्को विषय जती धेरै राम्रो क्षमताको कम्प्युटर भएपनी निरन्तर लामो समयसम्म काम गरिरहन्छ भन्नेपनी छैन । विहाँन कम्युटर खोल्दा जुन गतीमा काम भएको हुन्छ त्यहीँ गती बेलुकासम्म पनी देख्न पाइदैन । अझ कम्प्युटर जती पुरानो हुदै गयो त्यतिनै काम गर्ने गतीमा सुस्तता हुदै गइरहेको हुन्छ ।
धेरैभन्दा धेरै फाईल फोल्डरले भरिभराउ कम्युटरले निकै सुस्त गतीमा काम गर्न थाल्यो भने कम्प्युटर फर्मेट गर्नुपर्छ भन्ने गरेको पनी सुन्न पाइन्छ । फर्मेट लामो समयपछि मात्रै गरिन्छ , पटक पटक फर्मेट गरिदै गइयो भने कम्प्युटरको काम गर्ने क्षमतामा नकरात्मक असर पर्न थाल्छ र चाडै सो कम्प्युटर फोहोरको थुप्रोमा मिल्काउनुपर्ने पनी हुनसक्छ । तर त्यसको ठाउँमा आवश्यक काम गरिसकेपछि कम्प्युटरलाई केहि मिनेटसम्म मात्रैपनी केयर गरियो भने निरन्तर लामो समयसम्म उहि पुरानै गतीमा काम लिन सकिन्छ । विशेषत हरेक दिन हामीले धेरै फाइल तथा फोल्डरहरु खोल्छौ र त्यही रहेर काम गरिरहदा बनेका डुप्लिकेट फाइल तथा फोल्डरहरुले कम्प्युटरको मेमोरीमै आफ्नो स्थान वनाएर वसेका हुन्छन् ।
त्यस्ता अनावश्यक फाइल फोल्डरलाई हटाएर आफ्नो कम्प्युटर चुस्तदुरुस्त वनाउको लागी सवैभन्दा पहिल्य किवोर्डमा “विण्डोज” आइकन र “आर” एकै पटक प्रेस गर्नुस् त्यहाँ रन खुल्नेछ । देखिएको चेकवक्समा recent टाइप गर्नुस र इन्टर प्रेस गर्नुस् । त्यहाँ धेरै फाइलहरु देखिनेछ र त्यसलाई डिलिट गर्नुस् । recent टाइप गरेर त्यस्ता फाइललाई डिलिट गरेजसैगरी क्रमश %temp% , temp र prefetch वाट पनी अनावश्यक सकंलित त्यस्ता फाइल एवं फोल्डर डिलिट गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता प्रकारका फाइल फोल्डर दैनिक जसो हटाउदै गएको खण्डमा कम्युटरले काममा राहत दिनेनै छ । नियमित रुपमा काम गर्दै गर्दा अचानक समस्या र गतीमा गिरावट नआओस भन्नको लागी यस्ता सानातिना लाग्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनिएको हो । दैनिक रुपमा कम्प्युटरमा काम गरिसकेपछि सट डाउन गर्नुअघि यस्ता प्रकारका डुप्लिकेट भएर वसेका फाइल,फोल्डरहरु हटाउन नर्विसनुहोला । अर्को महत्वपुर्ण विषय भनेको डिलिट गरिएका सम्पुण फाइल,फोल्डर रिसाइकल विनमा धकेल्नासाथ कम्प्युटरको भारमा कमी हुन्छ भन्ने भ्रममा पनी पर्न हुदैन । रिसाईकल विनलाई नै क्लियर गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै विण्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टम रहेको कम्प्युटरको गती वढाउने अर्को विधी डिस्क क्लिनअप पनी हो । डिस्क क्लिनअपसम्म पुग्नको लागी मेनुवारवाट अल प्रोग्राममा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ एससरिज अप्सन देखिनेछ सोहि मेनुमा सिस्टम पनी पाउन सकिन्छ । सिस्टम टुलमा माउस ओभर गर्नुभयो भनेमात्रै पनी डिस्क क्लिनअप देखिनेछ । डिस्क क्लिनअपवाट ड्राइभ छनोट गरेर त्यहाँ रहेका अनावश्यक फाइल,फोल्डर हटाउन सकिन्छ । कम्प्युटरको गती वढाउनको लागी गरिने अर्को विधी भनेको डिस्क डिफ्रागमेन्टर पनी हो । यसको लागी पनी मेनुवार हुदै अल प्रोगाममा गएर एसोसरिज मेनुमा माउस ओभर गर्न आवश्यक छ क्रमस सिस्टम टुलमा जानुपर्ने हुन्छ । डिस्क क्लिनअपसगै डिस्क डिफ्रागमेन्टर पनी देखिनेछ, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि कम्प्युटरको कुन ड्राइभमा जाने भन्ने विकल्प देख्नुहुनेछ र क्रमस कम्प्युटरमा रहेका ड्राइभरलाई सफ गर्न सकिन्छ ।
इन्टरनेट जोडिएको कम्प्युटरको गती अझ अरु कम्प्युटरभन्दा चाडै सुस्त हुने गर्दछ । इन्टरनेटवाट भाइरस तथा अनावश्यक सफट्वेयर डाउनलोडले गर्दापनी प्रोसेसरमा प्रभाव भइरहेको हुने हुदा कुन कुन अनलाइन साइट खोल्न आवश्यक छ र थोरैभन्दा थोरै के कती सफटवेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फपनी ध्यान दिन सकेको खण्डमा आफुले चलाउदै आइरहेको कम्प्युटरलाई भार तथा चाप कम हुन जान्छ भने हामीले पनी कम्प्युटर केयर गरिएको ठहरिन्छ । ९ माघ २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित ।
‘एकै क्लिकमा कम्प्युटरलाई यसरी फास्ट बनाउनुस्”
Nepali August 1, 2013
Dipak Thapa January 25, 2013 Log in to Reply
thanx for simple but useful tips 🙂
Shanti Bikram Gautam January 25, 2013 Log in to Reply
साधारण लागेपनी निकै प्रभावकारी हो भन्ने हाम्लाई लागिराछ 🙂